Herinandron'ny ivon-toeram-panoratana iraisam-pirenena - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
Miaraha aminay 14-18 Febroary!
Tsindrio Eto fa ny fandaharam-pankalazana herinandro feno
Herinandron'ny ivon'ny fanoratana iraisam-pirenena dia fahafahana ho an'ny olona miasa any amin'ny foibe fanoratana mba hankalaza ny fanoratana sy hanaparitahana ny saina momba ny anjara asa lehibe ataon'ny foibe fanoratana any an-tsekoly, any amin'ny tobim-pianarana eny amin'ny oniversite, ary ao anatin'ny vondrom-piarahamonina lehibe kokoa.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fanoratra, ho setrin'ny antso avy amin'ny mpikambana ao aminy, dia namorona ny "Herinandron'ny Ivotoeram-panoratana Iraisam-pirenena" tamin'ny 2006. Ny komity mpikambana dia nahitana an'i Pam Childers, Michele Eodice, Clint Gardner (Filoha), Gayla Keesee, Mary Arnold Schwartz, ary Katherine Theriault. Ny herinandro dia voalahatra isan-taona manodidina ny andron'ny mpifankatia. Manantena ny IWCA fa hankalazaina any amin'ireo foibe fanoratana manerana izao tontolo izao ity hetsika fanao isan-taona ity.
Nankalaza ny foibe fanoratana ny IWCA nandritra ny herinandron'ny 8 febroary 2021.
Raha te hijery ny nataonay sy hijery ny sarintany ifandrimbonan'ny foibe fanoratana manerana an'izao tontolo izao, jereo Herinandro IWC 2021.